स्क्र्याचबाट म्याकोस सिएरा १०.१२ कसरी स्थापना गर्ने, चरण-चरण | म म्याकबाट हुँ
स्क्र्याचबाट सियरा कसरी स्थापना गर्ने
जोर्डी गिमेनेज | | MacOS सियरा, ट्यूटोरियलहरू
तपाई चाहानुहुन्छ स्क्र्याचबाट सियरा स्थापना गर्नुहोस्? हामी म्याकहरूको लागि नयाँ एप्पल अपरेटि system प्रणालीमा हेरीरहेका छौं र एक पटक हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गरिसकेका छौं, हामी सिफारिस गर्छौं स्क्र्याचबाट स्थापना गरिएको कुनै पनि अन्य मेटाइएको अनुप्रयोगहरू, त्रुटिहरू वा कुनै पनि नयाँ संस्करणको अनुभवलाई नोक्सान गर्न सक्ने हटाउन को लागी। प्रणाली।
सत्य यो हो कि यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण अद्यावधिकहरू उनीहरूलाई स्क्र्याचबाट गर्न सल्लाह दिइन्छ यद्यपि यो एक आवश्यक आवश्यकता होईन, यदि तपाईं स्क्रैचबाट म्याकोस सियरा स्थापना गर्न चाहनुहुन्न भने केवल यसलाई म्याक अनुप्रयोग स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापनामा क्लिक गर्नुहोस्।। अघि, हामी तपाईंलाई केही गडबडी भएको खण्डमा ब्याकअप बनाउन सल्लाह दिन्छौं, तर सिद्धान्तमा यो भन्दा बढि गोप्य कुरा छैन। त्यसोभए यदि तपाईं यसलाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने यो हो किनकि तपाईं म्याकोस सियरा स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ तपाईंको म्याकमा स्क्र्याचबाट यसलाई एक बुटेबल USB बाट गर्नका लागि चरणहरू हेर्नुहोस्।
सर्वप्रथम सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्झाउनुहोस् जो आफ्नो म्याकलाई उनीहरूको अवस्थितबाट सुरूबाट अपडेट गर्न चाहन्छन् सफ्ट स्थापना पूरा गर्न धेरै पूर्ण रूपमा मान्य विधिहरू तर के हामी सधैं प्रयोग गर्छौं DiskMaker उपकरण जुन आधिकारिक वेबसाइटबाट सिधै डाउनलोड गर्न सकिन्छ र यहाँ हामी तपाईंलाई लिंक छोड्दछौं। वास्तवमा यो एक USB बुटेबल बनाउन र स्क्र्याचबाट नयाँ अपरेटिंग प्रणाली स्थापना गर्न सक्षम हुनको लागि एक विधि हो र यो हाम्रो लागि धेरै राम्रो काम गर्दछ त्यसैले हामी जहिले पनि यसलाई दोहोर्याउँदछौं। प्रक्रिया पहिलेका अवसरहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ तर हामी चरण-देखि चरण देख्दै छौं ताकि सबै कुरा सुरूदेखि नै स्पष्ट छ।
यी केसहरूमा एक महत्त्वपूर्ण विवरण यो हो कि स्क्र्याचबाट स्थापना हुन्छ वा यदि हामी हालको प्रणालीमा सिधा प्रणाली अपडेट गर्न जाँदैछौं भने, पूरा प्रक्रिया गर्नुको साथ गर्नु हो। म्याकबुक केबल मार्फत राउटरमा जडित छ र उही समयमा बिजुली नेटवर्कमा जडान भयो डाउनलोड र अपडेटमा दुबै सम्भावित समस्याहरूबाट बच्न।
1 ढाँचा USB / SD
3 MacOS सियरा १०.१२ स्थापना गर्दै
4 महत्वपूर्ण डाटा
ढाँचा USB / SD
पहिलो कुरा र यदि हामी कार्य अगाडि बढाउन चाहान्छौं जबकि नयाँ म्याकोस सियरा १०.१२ हाम्रो म्याकमा डाउनलोड गरिएको छ, यो फर्म्याट पूरा गर्नु हो। USB वा SD कार्ड GBGB वा उच्च कि हामीलाई अपरेटिंग प्रणालीको सफाई स्थापनाको लागि आवश्यक छ त्यसैले हामी यसलाई म्याकको USB पोर्टमा जडान गर्दछौं र सुरु गर्दछौं। प्रक्रिया सरल छ र हामीले भर्ना गर्नु पर्छ डिस्क उपयोगिता जुन मा छ अन्य फोल्डर भित्र लन्चप्याड। एक पटक भित्र हामी USB / SD चयन गर्दछौं र क्लिक गर्नुहोस् मेट्न, हामी थप्छौं el ढाँचा: म्याक ओएस प्लस (यात्रा) र हामी हामीले चाहेको नाम राख्छौं वा सिधै म्याकोस सियरा। यस प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिएको USB वा SD कार्ड पूर्ण रूपमा मेटाइनेछ, त्यसैले प्रक्रिया अघि बढ्नु अघि यसमा रहेको डाटासँग होशियार रहनुहोस्।
एक पटक हाम्रो यूएसबी / एसडी तयार भएपछि डिस्क मकर उपकरण बुटेबल डिस्क र म्याकोस सियरा डाउनलोड गर्नका लागि तयार छ हाम्रो म्याकमा, हामी प्रक्रिया सुरू गर्न सक्छौं। USB / SD को साथ म्याकमा जोडिएको छ DiskMaker आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् को विकल्पको बारेमा ओएस एक्स एल क्यापिटन स्थापना गर्नुहोस् (हामी कल्पना गर्छौं कि म्याकोस सिएरा चाँडै देखा पर्ने छ) राम्रो काम गर्दछ म्याकोस सिएराको साथ र म्याकोस सियराको पहिले बनाइएको डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् जुन एक स्थापनाकर्ताको रूपमा अनुप्रयोग फोल्डरमा हुनेछ।
अब यसले हामीलाई प्रशासक पासवर्डको लागि सोध्छ त्यसैले हामी यो राख्छौं र जारी राख्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्। अब GB जीबी युएसबी / एसडीमा स्थापना प्रक्रिया समाप्त हुनको लागि कुर्ने समय आइसकेको छ यदि यसले केही शान्त समय लिन्छ भने, यो सामान्य हो। कुनै पनि केसमा हामी कार्यक्रम बन्द गर्दैनौं, म्याकबाट USB / SD बिच्छेदन गर्नुहोस् वा कम्प्युटर बन्द गर्नेछौं। एकचोटि समाप्त भएपछि हामी सुरु गर्न सक्छौं macOS सिएरा सफाई स्थापना प्रक्रिया हाम्रोमा मेशीन.
[अपडेट ० / / 22 / १09]
डिस्कमेकर यो म्याकोस सिएरा समर्थन गर्न अपडेट गरिएको छ। तर यदि यो तपाइँको लागि काम गर्दैन, त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले प्रक्रिया बाट प्रक्रिया गरेका छन् उपकरण डिस्कक्रिएटर। यो अन्तिम उपकरण USB सिर्जना गर्न प्रयोगमा डिस्कमकरसँग मिल्दोजुल्दो छ।
प्रक्रिया लामो समय लिन सक्दछ, त्यसैले यससँग धैर्य गर्नुहोस्। यदि अन्तमा तपाईले त्रुटि प्राप्त गर्नुभयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, यो किनभने उपकरण म्याकोस सियराका लागि वास्तवमै तयार छैन उपकरण अब मितिमा छ र प्रक्रिया राम्रोसँग जान्छ. यसको लागि हामी USB / SD मा हेर्न सक्दछौं र यदि स्थापनाकर्ता भित्र देखा पर्‍यो भने यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न क्लिक गर्नुहोस् (cmd + i) र यसले 4,78..XNUMX जीबी ठाउँ ओगट्नु पर्छ। यदि यो मामला हो भने, प्रक्रिया राम्रोसँग चलेको छ.
MacOS सियरा १०.१२ स्थापना गर्दै
एक पटक USB / SD को साथ डिस्कMaker प्रक्रिया समाप्त भएपछि हामी वास्तवमै हाम्रो रुचि राख्नुपर्ने कुरामा जान सक्दछौं, जुन हो म्याकमा प्रणाली स्थापना। प्रक्रिया सुरू गर्न म्याकलाई बन्द गर्दै जत्तिकै सरल छ USB / SD जोडिएको साथ र सुरुको क्षणमा हामी Alt कुञ्जी होल्ड सुरूवात मेनू देखा पर्नको लागि, हामी USB मेमोरी वा एसडी कार्ड छान्छौं जहाँ हामीसँग म्याकोओस सिएरा स्थापनाकर्ता छ र यो नै हो।
अब हाम्रो पालो हो OS X El Capitan मेट्नुहोस् हाम्रो म्याकको र यसको लागि हामी डिस्क उपयोगिता विकल्प छान्छौं र हालको OS X बाट यसको साथ छोडेर हाम्रो विभाजन हटाउँछौं el ढाँचा: म्याक ओएस प्लस (यात्रा)। हामी डिस्क उपयोगिताबाट बाहिर निस्कन्छौं र म्याकोस सियराको स्थापनासँग जारी राख्छौं। एक पटक प्रक्रिया समाप्त भएपछि, हामी अब अपरेटिंग सिस्टमको नयाँ संस्करणको पूर्ण सफासँग स्थापना गर्न सक्नेछौं।
हामी जहिले पनि अपडेटहरूको स्थापना सिफारिश गर्दछौं कम्प्युटरमा, यो म्याक, आईफोन, एप्पल वाच, एप्पल टिभी, इत्यादि हो, र मुख्य कारण अपडेटले हामीलाई प्रदान गर्ने सुरक्षा र समाचार हो।
के सफा वा ताजा स्थापना अनिवार्य छ? होइन, यो छैन, तर जब हामी एक अपरेटि system प्रणालीबाट अर्कोमा जान्छौं म्याक र त्यसका लागि सफा गर्न रोचक हुन्छ, स्क्र्याचबाट स्थापना गर्नु भन्दा राम्रो के हो। अर्कोतर्फ, यदि हामी हाम्रो म्याकको ब्याकअप लोड गर्नबाट बच्न सक्दछौं, तब हामी अझ राम्ररी जान्दछौं कि सबै कार्यक्रमहरू एक एक गरेर अर्को स्थापना गर्न केही गाह्रो छ, तर हामीले यो सोच्नुपर्दछ कि यो केवल एक पटक मात्र गरिएको हो। वर्ष र हाम्रो म्याक र प्रयोगकर्ता अनुभव यसको कदर गर्नेछ।
मैले पहिले नै भनेको छु कि त्यहाँ म्याकमा सफा स्थापना गर्न वा म्याकोस सियराको स्क्र्याचबाट धेरै विधिहरू छन्, तर म यसलाई व्यक्तिगत रूपमा वर्षौं पछि यसको विश्वसनीयताको लागि मनपराउँदछु र किनभने त्यहाँ कुनै पनि मामिला भएमा वर्षभर स्थापनाकर्ता हुँ। म्याक समस्या वा असफलता। स्क्र्याचबाट म्याक अद्यावधिक गर्न यो आवश्यक आवश्यकता छैनत्यो प्रत्येक व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले म्याक अनुप्रयोग स्टोर पहुँच गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरेर अपडेट गर्नुहोस्, हामीसँग हाम्रो म्याकमा नयाँ अपरेटिंग सिस्टम स्थापना हुनेछ।
म्याकोस सिएराको आनन्द लिनुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » स्क्र्याचबाट सियरा कसरी स्थापना गर्ने
फ्रान्सिस पेना भन्यो
म यसलाई पीसीबाट कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु
फ्रान्सिस पेनलाई जवाफ दिनुहोस्
यस महत्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, किनकि म ० बाट अपडेट गर्न चाहान्छु।
यास्मिना मकास पेरेज भन्यो
मेरो एउटा विभाजन छ (मलाई लाग्छ कि यो त्यस्तो भनिन्छ) विन्डोजसँग .. स्थापना गरिरहेको छ उनीहरूले भने जस्तै मैले हराउनु पर्छ?
यास्मिना मकास पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
Nives Casas hahaha तपाईं मलाई जासूस !! जे भए पनि, म पक्का छु कि यदि तपाईंले यसलाई किन्नुभयो भने, यो आउँछ र यदि होईन ... यो निर्भर गर्दछ कि उनीहरूले कहाँ स्थापना गर्न सक्छन्, किनकि केरा कम्प्युटरमा उनीहरूले मलाई अन्तिममा उनीहरूसँग यो लिनको लागि प्रस्ताव गरे। अद्यावधिक गर्नुहोस्
यदि तपाइँ स्क्र्याचबाट स्थापना गर्नुहुन्छ भने तपाइँले सिर्जना गरिएका विभाजनहरू हराउनुहुन्छ तर तपाइँ तिनीहरूलाई पुनः सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। सोच्नुहोस् कि स्क्र्याचबाट स्थापना गर्नु भनेको तपाईको म्याकमा भएको सबै चीज मेटाउनु हो (सँधै ब्याकअपको साथमा) र यसले विभाजनहरू, डेटा र अन्य समावेश गर्दछ।
एनरिक बर्टोमेउ भन्यो
जोर्डी मलाई लाग्छ म तपाईंसंग सहमत छैनँ, यदि तपाईं ० बाट स्थापना गर्नुभयो भने तपाईं ओएस जाने विभाजनलाई मात्र ढाँचाबद्ध गर्नुहुन्छ भने, अन्य विभाजन अक्षुण्ण रहन्छ।
Enric bertomeu लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक गर्नुहोस् तपाईले म्याकोस विभाजनलाई ढाँचा गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो सम्भव छ कि जब प्राय जसो प्रयोगकर्ताहरूले सम्पूर्ण डिस्कलाई ढाँचा दिन्छन् र तिनीहरू समस्या हुन्। अवश्य पनि, मेरो सिफारिश भनेको केवल समय मेशीन छोड्नु हो र उत्तम केसमा बाहिरी डिस्कमा ब्याक अप गर्न डिस्क सफा गर्न जहाँ ओएस जान्छ र समस्या हुँदैन। यस तरीकाले डिस्क पूर्ण रूपले ढाँचामा छ र जब सम्भव समस्याहरू बर्षभरि टाढा रहन्छ।
तपाइँको योगदान को लागी धेरै धन्यवाद
तपाईंको कुराकानीमा जानको लागि मलाई माफ गर्नुहोस् तर म्याकमा चेरी स्थापना गर्न यो अपराध हो। मेरो विचार eee
जोसे Fco कास्ट hahaha म दैनिक कप्तान प्रयोग गर्दछु तर अध्ययन उद्देश्यको लागि मैले कक्षामा जस्तै कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन मेरो जीवन पत्ता लगाउनुपर्‍यो र मैले विन्डोजसँग मात्र गर्न सक्थें, र भगवान एपलले त्यो विकल्प दिन्छु भन्ने धन्यवाद दिन्छ (दुई अपरेटिंग हुन्छ प्रणालीहरू स्थापना गरियो)
धन्यबाद, यो ठीक छ, एकचोटि तपाईंले स्क्र्याचबाट स्थापना सुरु गर्नुभयो भने, म कसरी ब्याकअपबाट रुचि राख्ने अनुप्रयोगहरू र डाटा निकाल्न सक्छु?
FidelWare लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार फिडेलवेयर, म्याक अनुप्रयोग स्टोरबाट एप्लिकेसनहरू सँगै टाइम मेशीनको साथ तपाईं आवश्यक डाटा पाउन सक्नुहुनेछ।
डिस्क त्रुटिको कारण सिर्जना गर्न सकिएन: त्रुटि देखा पर्‍यो: -१०००10006। फाइन्डरले एउटा त्रुटि पत्ता लगायो: डिस्क "OSX एल क्यापिटन" "DMX_Workdisk" स्थापना गर्न सक्दैन।
मैले यसमा दुई चोटि प्रयास गरेको छु, सफलता बिना।
लेखमा स्पष्ट गरिएको छ। यो त्रुटि सामान्य छ किनकि उपकरणले सुरुमा म्याकोस सियरा समर्थन गर्दैन, तर वास्तवमा स्थापनाकर्ता सिर्जना गरिएको छ।
DiskMaker X को साथ, तपाईं सक्नुहुन्न, यो अन्त्यमा देखा पर्दछ -_-
त्रुटि फ्याँकिएको छ किनकि हामीले यो बताउँदछौं कि यो एल् क्यापिटन हो र यो वास्तवमा म्याकोस सियरा हो तर बुटेबल साथीले त्यस्तै कार्य गर्दछ।
मर्विन १ भन्यो
ASObjC Runner.app मलाई सोध्छ
Mervin16 लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मर्विन १,,
मैले यसलाई डिस्कमेकर FAQ मा फेला:
मैले एउटा ASObjC धावक त्रुटि सामना गर्दै छ (त्रुटि -43।। ASObjC रनर फाइल भेटिएन)!
यो एक धेरै मुश्किल छ। यो बग हो जुन सिंह डिस्कमार्करको साथ अनियमित रूपमा हुन्छ र केहि कोडिंग त्रुटि बाहेक कुनै वास्तविक व्याख्या छैन।
मैले समस्या फेला पार्न सक्ने एक मात्र तरीका यो हो:
गतिविधि मोनिटर (in / applicationl / उपयोगिता) को कुनै पनि उदाहरण ASObjC धावक अन्त्य गर्न प्रयोग गर्नुहोस्;
तपाईंको म्याक रिबुट गर्नुहोस्;
फेरि जाँच गर्नुहोस् यदि ASObjC धावक अझै गतिविधि गतिविधि अनुगमनकर्तामा चलिरहेको छ;
फेरी लायन डिस्कमार्कर फेरि सुरू गर्नुहोस् र तपाईंको डिस्क निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही, फरक, सफ्ट सेसन प्रयोग गरेर मद्दत गर्न सक्छ।
यदि तपाईंसँग यस समस्याको बारेमा कुनै अन्तरदृष्टि छ भने, कृपया मसँग सम्पर्क राख्नुहोस्।
आशा छ, यसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ, साभार
जब यो समाप्त हुन्छ म एक त्रुटि पाउँछु ... हा हाठ! धेरै राम्रो लेख! धन्यवाद!
Sebagno लाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई भइरहन्छ तर मलाई लाग्छ कि यो किनभने मसँग म्याकोस सिएराको बीटा स्थापना भएको छ।
सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
कस्तो अनौंठो ... म्याकोस सिएराको बीटा स्थापना गर्न समस्या हुनु हुँदैन,
हामीलाई भन्नुहोस् कि यदि तपाईले अन्य सहकर्मीहरूको लागि समाधान फेला पार्नुभयो।
हाहाहा, तपाईं हुनेछ ...
नाचो मोरेनो भन्यो
स्थापनाकर्ता पेलोड हस्ताक्षर जाँच, कुनै मद्दत गर्न असफल भयो ?????
नाचो मोरेनोलाई जवाफ दिनुहोस्
मिगुएल डे ला फुएन्टे (@ मिगुल्फेलकाबा) भन्यो
यसले मलाई उही त्रुटि दिन्छ, मैले यसलाई बन्द गरेको छु र खुला छ र त्यहाँ केही स्थापना गरिएको छैन। मैले समय मेशीनबाट पुन: स्थापना गर्नुपर्‍यो।
Miguel de la Fuente (@ miguelfcaba) लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, DiskMaker उपकरण अपडेट गरीएको छ म्याकोस सियराको लागि समर्थन प्रस्ताव राख्दै र यो अब कुनै समस्या हुने छैन। लेख मा यो पहिले नै राम्रो गरीएको छ।
अभिवादन र धन्यवाद।
सिजर अगस्टस भन्यो
यो किनभने तपाईंको म्याक समय र मिति सिंक भन्दा बाहिर छ, निम्न गर्नुहोस्।
१- मुख्य स्थापना स्क्रिनमा जानुहोस्, उपयोगिताहरूमा जानुहोस्, र टर्मिनल खोल्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग वाइफाइ जडान छ भने, जडान गर्नुहोस्,
२ºयता तपाई टर्मिनलमा नेटवर्क लेख्नु भएको छ,
"तिथि" कोर्सको उद्धरण बिना!
समय र मिति देखा पर्नेछ,,
º- तपाईंलाई एप्पल सर्भरबाट ठीक समयमा अपडेट गर्न तलको आदेश लेख्नुहोस्।
ntpdate -u time.apple.com र हिट रिटर्न।
CesarAugusto लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद CesarAugusto। तपाईंको समाधान उत्तम छ ...।
शुभ रात्री। के म केवल म्याकिन्टस एचडी विभाजन मात्र मेटाउँछु वा समस्या बिना नै सम्पूर्ण डिस्क मेटाउन सक्छु?
यसलाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ प्रत्येक प्रयोगकर्ताले उनीहरूले चाहे अनुसार गर्न सक्छन, म सम्पूर्ण डिस्क इरेजरलाई सिफारिश गर्दछु (तपाईसँग अर्को डिस्कमा टाईम मेशीनको प्रतिलिपि सुरक्षित हुन्छ) तर तपाईले अपरेटिंग प्रणाली विभाजन मात्र हटाउन सक्नुहुनेछ र त्यहाँ स्थापना गर्नुहोस्।
नमस्कार, मैले दुबै कार्यक्रमहरूमार्फत गरेको छु र पहिले नै अपडेट गरिएको छ र यसले मलाई उही त्रुटि देखाउँदै छ, किन म यसलाई समाधान गर्न सक्छु? म पहिले नै रिकभरीको बाहिर भाग्यो र म केहि स्थापना गर्न सक्दिन 🙁
जुआन जोस बुर्सियागा भन्यो
म जहिले पनि विश्वास गर्थें, सफा स्थापना पछि मैले सबै कुरा टाइम मेशिनको सहयोगमा पुन: लोड गर्नुपर्दछ, अब मँ बुझ्छु कि यो त्यस्तो हुनु हुँदैन, तर केवल मेरो सबै संगीत डिस्कलाई डिस्क मार्फत सफासँग राख्नु भनेको मलाई बनाउँदैन। अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ। के यो वास्तवमै यसरी हुनु पर्छ?
जुआन जोस बुर्सियागालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले डिस्क निर्मातासँग पेनड्राइभ सिर्जना गर्ने प्रक्रिया गरें, करीव min मिनेट स्थापना भए पछि एउटा त्रुटि देखा पर्‍यो: instal स्थापनाकर्ता पेलोडको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्न सकेन »… यसले मात्र स्वीकार गर्न विकल्प दिन्छ र मूल्यको मूल्यमा फर्काउँछ। स्थापनाकर्ता फेरि, मैले पेन्ड्राइव फेरि सिर्जना गरेको छु, फेरि स्थापना गरीदिएको छु र वास्तवमा उस्तै देखा पर्दछ ... कृपया मद्दत गर्नुहोस्।
नमस्कार जोर्डी, तपाईले पहिले उल्लेख गर्नु भएको सबै प्रक्रियाहरू मैले गरेँ र तपाईंले टिप्पणी गर्नुभएमा मैले त्रुटि पाउँदछु। जब म यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्दछु (सेमीडी + i), यसले मलाई 4,6. G जीबी समात्छ र 4,78 GB जीबी तपाईंले संकेत गर्नुहुन्न।
मैले मान्नु पर्छ कि स्थापनाकर्ता सही संख्यामा प्रतिलिपि गरिएको थिएन
डेविड जी। भन्यो
मैले यसलाई हार्ड डिस्कमा part पार्टिसनको साथ बनाईएको छु, जुन: DMG PROGRAMS, TIME MACHINES र OSX INSTALLER। मैले हटाउन योग्य डिस्कको स्थापनाकर्ता पार्टीशनमा म्याकोस स्थापना गर्न प्रोग्राम प्रयोग गरेको छु र मेरो आश्चर्य के हो ... कार्यक्रमले सम्पूर्ण हार्ड डिस्क मेटाइसकेको छ र पार्टिशनलाई औंल्याएको थियो ... धन्यबाद मैले कार्यक्रमहरूको प्रतिलिपि बनाएको छु अघि ...
डेभिड जी लाई जवाफ दिनुहोस्।
नमस्कार, म यो डिस्क डिस्क X6को नयाँ संस्करणको साथ गर्दछ जुन म्याकोस सियरालाई पहिले नै समर्थन गर्दछ र यसले मलाई त्रुटि दिन्छ। ती मध्ये एक हो:
त्रुटि देखा पर्‍यो: -१०००10006। खोजकर्ताले एउटा त्रुटि पत्ता लगायो: डिस्क "स्थापना म्याकोस सिएरा" "DMX_Workdisk" मा सेट गर्न सकिदैन
Dareg लाई जवाफ दिनुहोस्
ती सबै जो तपाईंलाई त्रुटि दिन्छन्, फेरि डिस्कमेकर प्रविष्ट गर्न प्रयास गर्नुहोस् र नयाँ संस्करणको साथ स्थापनाकर्ता सिर्जना गर्नुहोस्
http://diskmakerx.com हामी लेख अपडेट गर्दछौं। व्यक्तिगत रूपमा मैले यसलाई हिजो रात र कुनै समस्या बिना नै स्थापना गरेको हो तर अपडेट गरिएको डिस्कमेकरसँगै।
यो नयाँ संस्करणको साथ हो जुन मैले त्रुटिहरू पाउँदछु।
भिक्टर मनोबल भन्यो
सबैलाई नमस्कार। मैले भर्खर १ घन्टा पहिले डिस्कमेकरको नयाँ संस्करण डाउनलोड गरेको थिए र यसले मलाई उही त्रुटि पठाउँदै छ जुन उनीहरूले "DMX_Workdisk" उल्लेख गरे। मैले पहिले नै / भोल्युम्समा जाँच गरें र अन्य संस्करणहरूको केही पनि छैन, म्याक ओएस सियराको लागि त्यहाँ एक मात्र छ। पहिले नै युएसबी फेरि सिर्जना गर्नुहोस्, र फेरि सुरु गर्नुहोस् र केहि पनि छैन। केहि तपाइँको लागि काम गर्नुभयो?
भिक्टर मोरालेसलाई जवाफ दिनुहोस्
यसले कमसेकम मलाई त्रुटि --१००10006 giving दिँदैछ।
केभीलाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ प्रभात, म्याकोस सिएराको मेमोरीमा प्रतिलिपि गर्ने प्रक्रियाको बारेमा मलाई कसरी थाहा छ?
शुभ बिहानी, म्याकोस सियराको मेमोरीमा स्थापना गर्न कति समय लाग्छ?
हेलेना लोपेज भन्यो
यसले मलाई यसको त्रुटि दिन्छ: "स्थापनाकर्ता पेलोडको हस्ताक्षर जाँच गर्न सकेन"
मैले नयाँ डिस्कमेकरको साथ सबै चीज गरेको छु तर यसले मलाई प्रत्येक पटक समान त्रुटि दिन्छ: एस
कृपया मलाई समाधान दिनुहोस् !!!
अग्रिम धन्यवाद जोर्डी
हेलेना लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मकोससिएरासँग मेरो प्रश्न छ, के यसले तपाईंलाई अनुप्रयोग स्टोर बाहिर अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न अनुमति दिँदछ? मसँग पेंड्राइभ पनि छ जुन गाईड विभाजन तालिकाको रूपमा देखा पर्दछ र म यसलाई मेटाउन सक्दिन। यसले मलाई विभाजन र गाइड सिर्जना गर्ने विकल्प दिदैन। यो केवल मलाई पेन्ड्राइभमा हुन्छ। म कसरी यसलाई कारखानाको रूपमा छोड्न सक्छु?
मैले नयाँ डिस्कमेकर स्थापना गरें र यसले मलाई त्रुटि दिन्छ, मैले टाइम मेशिनका साथ पूर्वावस्था गर्ने प्रयास गरेँ र यसले मलाई त्रुटि दिए। अब म कारखाना मोड (सेमीडी + आर) मा फर्कने कोशिश गर्दैछु। हामी आविष्कार देख्नेछौं ..... जहाँ यो बाहिर आउँछ।
डिस्कमेकरले काम गरेन, म स्थापना डिस्क सिर्जनाकर्ता प्रयोग गर्‍यो र यसले १००% काम गर्यो।
गाईडका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
योगदान रिकार्डोको लागि धन्यवाद हामी यसलाई भविष्यका ट्यूटोरियलहरूको लागि खातामा लिनेछौं! जे भए पनि मेरो डिस्कमकरले मेरो लागि राम्रो काम गर्यो।
धन्यवाद रिचर्ड! मलाई यो थाँहा थिएन र यससँग कुनै समस्या छैन र ० बाट स्थापना गर्नका लागि तयार छ।
राम्रो, मैले यसलाई म्याकबाट स्थापना गर्ने प्रयास गरें र मैले उही त्रुटि पाएँ "इन्स्टलर पेलोडको हस्ताक्षर जाँच गर्न सकेन", र केही पनि छैन।
कसैसँग पहिले नै समाधान छ
त्यहाँ ढिला २०० 2008 म्याकमा स्थापना गर्ने कुनै तरिका छ?
"DiskMaker" कार्यक्रम OS OS मा काम गर्दैनन् को साथ सावधान रहनुहोस्। यद्यपि यो कल्पित अनुकूल छ, यसले जानकारी बचत गर्न को लागी अगाडि बढ्दैन, यसले यसलाई आधी छोड्दछ (त्यो मलाई भयो)। मैले दुःख पाएँ, जबसम्म मैले यस लेख indicated डिस्कक्रिएटर in मा दर्साइएको अन्य कार्यक्रम भेट्टाएन र अब म खुसी छु .. हाहा 😀
Jair लाई जवाफ दिनुहोस्
शुभ अपरान्ह, म अनुप्रयोग स्टोरबाट सिधै डाउनलोड गर्न चाहन्थें, ताकि यो स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुनेछ, तर मसँग एउटा त्रुटि आउँदछ जुन भन्छन "यस डिस्कले GID विभाजन तालिका योजना प्रयोग गर्दैन, र मलाई के गर्ने थाहा छैन। मसँग तपाईं कप्तान एक्स हुनुहुन्छ र यसले मेरो लागि राम्रो काम गर्छ, मैले के गर्नुपर्छ? धन्यवाद
मैले यसलाई डिस्कक्रिएटरको साथ सिर्जना गरेको मैले सन्देश पाएँ: instal स्थापनाकर्ता पेलोड हस्ताक्षर जाँच गर्न सकिएन »
मैले पहिले नै मेरो रिकभरी विभाजन हटाइसकेको छु र अब म केहि पनि रिसेट गर्न सक्दिन, म केवल रिकभरि विकल्प अनलाइन पाउँछु तर यसले मेरो लागि काम गर्दैन, मलाई अब के गर्ने थाहा छैन, मैले यसलाई समर्थनमा लैजानु पर्छ। store! 🙁
इमानदारीपूर्वक, मैले यसलाई स्क्र्याचबाट स्थापना गर्न कुनै फाइदा देख्दिन। यस पृष्ठमा सिर्जना गरिएकोले पनि "... जब हामी एक अपरेटि system प्रणालीबाट अर्कोमा जान्छौं म्याक सफा गर्न रोचक हुन्छ", त्यसैले त्यहाँ जटिलताहरूमा पर्न आवश्यक पर्दैन। मैले एक र अर्को अनुप्रयोग खोल्ने प्रयास गरें र सबै चीजहरू राम्रोसँग काम गर्दछन्। यदि तपाईं अनुप्रयोग स्टोरमा "किन्नुभएको छ", सिएरा देखा पर्दैन यदि तपाईं पहिल्यै डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने।
जीवन किन जटिल छ?
Traven लाई जवाफ दिनुहोस्
हेरौं कि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्दछ किनभने मलाई थाहा छैन कि उसले अब के गरिरहेछ ...
२०१ 13 बाट मसँग एक म्याकबुक प्रो १ ret रेटिना छ, जुनसँग यो सिद्धान्तमा १००% उपयुक्त छ। अवश्य ब्याकअप र त्यस्तै ...
मसँग सिएराको दुई स्थापनाहरू (अपडेटहरू) छन् र दुबैमा, एक पटक स्थापना भएपछि, यो लोडि the बारमा सुरुमा स्थिर छ। अहिले म दोस्रो ब्याकअप रिकभरी गर्दैछु। तर म तेस्रो स्थापना गर्ने आँट गर्दैन किनकि मलाई डर छ केहि पनि परिवर्तन हुँदैन।
मैले क्लीन माई म्याक, ओनिक्स, धेरै एन्टिभाइरस, सिद्धान्तमा सबै कुरा स्वच्छ पार गरेको छु। १००bb हार्ड डिस्क ...
मलाई थाहा छैन यदि मैले स्क्र्याचबाट स्थापना गर्न हिम्मत गरें किनभने मलाई निश्चित छ कि मैले केही कार्यक्रम हराएको छु ...
यो कसैलाई भएको छ? के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ?
Javierote लाई जवाफ दिनुहोस्
ब्रुनो पेसेट्टी भन्यो
जब म म्याकबुक बन्द गर्छु र यो सुरु हुन्छ म Alt थिच्छु। बुट डिस्क आउँछ तर सिएराको साथ युएसबी देखा पर्दैन। मलाई थाहा छैन कि यो कसरी देखा पर्‍यो। म के गल्ति गर्दैछु?
ब्रुनो पासेट्टीलाई जवाफ दिनुहोस्
लुइस जी भन्यो
मसँग अझै समान समस्याहरू छन्, मैले पहिले नै माथि उल्लेखित सबै उपकरणहरू म्याकोस सिएरा बुटेबल बनाउन कोसिस गरें, यसले त्रुटि फ्याँक्छ "इन्स्टलर पेलोड हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण गर्न सकिएन" के कसैले यस सम्बन्धमा समाधान फेला पारेको छ?
लुइस जीलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, म उही समस्या हुँ। जब यो बूटयोग्य यूएसबी बाट मकओस सिएरा स्थापना समाप्त गर्दै छ, म त्रुटि पाउँछु "स्थापनाकर्ता पेलोडको हस्ताक्षर जाँच गर्न सकेन" र यसले मलाई स्थापनाबाट बाहिर लैजान्छ। कसैलाई थाहा छ यसलाई कसरी तय गर्ने?
Egarcia2c लाई जवाफ दिनुहोस्
हामी समस्याको समाधान "पेलोडको हस्ताक्षरको साथ ..." छोड्छौं। https://www.soydemac.com/solucion-la-problema-la-instalacion-macos-sierra-no-se-ha-podido-realizar-la-comprobacion-firma-la-carga-util-del-instalador/
अभिवादन र हामीलाई बताउनुहोस्
एड आरडीजेड भन्यो
जोर्डी तपाईको दयालु सहयोगका लागि धन्यबाद। म तपाईंलाई भन्छु कि मलाई "पेलोडको हस्ताक्षरको साथ" समस्या छ तर यहाँ प्रस्तुत समाधान मेरो लागि होईन, किनकि मिति र अब डाटा सहि छन्। कुनै सुझाव?
Ed Rdz लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते एड Rdz, समय ठीक भए पनि, यसलाई मैन्युअल्ली परिवर्तन गर्नुहोस्। यसले समस्या समाधान गर्न सक्दछ, मात्र यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि यो ठीक छ पर्याप्त छैन। टर्मिनलमा यसलाई म्यानुअल बनाउनुहोस्।
अर्कोतर्फ, यदि यसले तपाईंलाई यसो भन्छ भने, ब्याकअप बिना वा इन्टरनेट मार्फत स्टार्टअपबाट सिधा अपडेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईंले म्याक डिस्क परिवर्तन गर्नुभयो? तपाईसँग के म्याक छ?
शुभ दिउँसो, जब मैले यसलाई स्थापना गर्ने प्रयास गरें, मैले त्रुटि पाएँ कि मैले पहिले नै १०.२ स्थापना गरिसकें, तर मसँग कप्तान स्थापना छ। कुनै समाधान?
के तपाइँसँग तपाइँको म्याकमा बीटा संस्करणहरू स्थापना गरिएको छ? यो अचम्मको कुरा हो कि तपाईंले टिप्पणी गर्नुभयो किनभने सियरा संस्करण १०.१२ हो
इभान फ्ल्लोहरू भन्यो
नमस्कार, राम्रो दिन, मैले प्रक्रिया गरे तर जब तपाईं स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र प्रगति पट्टी भन्छ "० सेकेन्ड बाँकी" यो त्यहाँ रहन्छ, र यसले अब प्रगति वा केहि गर्दैन, मैले यो एक पटक गरेको थिएँ र म करीव hours घण्टा कुर्दै थिए, त्यसो भए मैले फेरि प्रक्रिया गरे र it घण्टा लाग्छ त्यो देखापर्‍यो र केही पनि भएन। म के गर्न सक्छु? मसँग म्याकबुक २०११ छ
इभान फ्ल्लोरलाई जवाफ दिनुहोस्
जब USB बुटेबल बनाउन को लागी डिस्क मकरले मलाई निम्न सन्देश थ्रो गर्दछ: drive ड्राइभ '/ भोल्यूमहरू / USB' मेटाउँछ .. »सन्देश बुझ्दैन <>
के उस्तै कुरा कसैलाई हुन्छ? कुनै समाधान?
Mdg लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, के तपाईंले समाधान फेला पार्नुभयो? हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ!
नमस्कार कार्ला, हो, धेरै कमिंग्स र ग्रोहरू पछि म यसलाई समाधान गर्न सक्षम भएँ। मैले DiskMaker X को साथ हजार पटक प्रयास गरें र म सँधै त्रुटि पाउँछु। समाधान: डिस्कक्रिएटर !! 🙂 म तपाईंलाई डाउनलोड लिंक दिनेछु र त्यसपछि मलाई भन्नुहोस् यो कसरी भयो। https://macdaddy.io/install-disk-creator/
यो खाली लोगो पट्टीमा रहन्छ र अरू केहि गर्दैन, एकै समयमा यो बन्द हुन्छ र यस्तै बारम्बार। के hgfo?
मसँग समान समस्या छ, जब म यसलाई 4.2.२ जीबीमा जाँच गर्छु र यो मेरो बुट डिस्कमा देखा पर्दैन जब मेशीन पुनःस्टार्ट गर्ने प्रयास गर्छु ... म केवल म्याकिन्टोच र पुन: प्राप्ति पाउँछु।
रोकीलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग दुईवटा इमेस्कहरू छन्, एक २०० from बाट र अर्को २०११ बाट, के म प्रत्येक इमेकमा स्वच्छ स्थापनाको लागि सिएराको साथ स्थापनामा समान यूएसबी प्रयोग गर्न सक्छु?
Chema_Han लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मसँग २०१ 2013 मा म्याक छ जुन संस्करण स्थापना भएको थियो र जब म सियरा संस्करणमा अपडेट गर्दछु, यो अपरेटि system प्रणालीमा प्रवेश गर्न असक्षम भयो र यसले यो सन्देश उत्पन्न गर्‍यो "भोल्यूममा म्याक ओएस वा ओएस एक्स स्थापना हुन्छ जुन बिग्रन सक्दछ"। ।
मलाई चिन्ता गर्ने कुरा, मलाई थाहा छ म्याकमा गल्ती र अति आत्मविश्वासले, मैले कहिले पनि एक ब्याकअप गरेन।
मलाई थाहा छैन IOS सियरा USB डाउनलोड गर्न सकिन्छ (अर्को कम्प्युटरमा) र त्यहाँ डाटा स्थापना नगरीकन स्थापना गर्न सकिन्छ।
Annabelleguittard लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते म सियरामा परिवर्तन गर्न चाहान्छु तर मसंग तेंपा छ र मेरो कम्प्युटर २०१० को हो।
के म यसलाई अपेल स्टोरबाट सिधै स्थापना गर्न सक्षम हुनेछु वा मैले कार्यक्रम उल्लेख गर्नु पर्छ कि तपाईंले पहिले उल्लेख गर्नु भएको छ ताकि म आरा काट्न सक्छु?
म दुई दिनको लागि चितुवामा क्यापिटल छवि स्थापना गर्न कोशिस गर्दैछु र यसले मलाई मेरो म्याक भित्र रहेको भौतिक डिस्कमा स्थापना गर्न दिदैन।
मैले फोरममा पढेको छु कि मैले सिएरा स्थापना गर्न सक्दिन यदि मैले पहिले चितुवा स्थापना गरेको छु भने। यो सत्य हो?
केस अलि अलि अलि अलि परेको छु र परिक्षणबाट भ्रमित छु।
तपाई मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?
मलाई बुझ्दैन जुन तपाईं USB को स्वरुपण गरिएको अंशमा सन्दर्भ गर्नुहुन्छ, के मैले कुनै USB लाई म्याकमा जोड्नु पर्छ?
म अग्रिम धन्यवाद दिन्छु; अभिवादन।
नमस्कार, मैले पहिले कप्तान स्थापना गरें र त्यसपछि म्याक ओएस सिएरा पास भयो र मैले यसलाई स्क्र्याचबाट गरेन र मेरो म्याक २०० of को अन्त्यबाट हो।
कुन भागमा MacOS सियरा स्थापित छ "अघिल्लो", जुन अनुप्रयोगहरूमा मानिन्छ ????
नमस्कार, मैले भर्खर म्याक ओएस सिएरामा अपग्रेड गरेको छु, र जब मैले मेरो म्याक खोल्छु भने लगइन स्क्रिनको छवि खाली छ र त्यहाँ कुनै अन्य छवि छैन, म के गर्ने?
Geordano लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रेस मेन्डोजा भन्यो
सबैजनालाई नमस्कार, २०११ बाट माथिको सबै म्याकबुक प्रो गरेपछि कुनै पनि एसडी कार्ड वा पेन्ड्राइभलाई मान्यता दिदैन डिस्कस्केमर 2011 वा डिस्क्रिएटरको साथ यति गरेर। तर म सिएरा स्थापना पछि सफा स्थापना गर्न कोशिस गर्दैछु।
मलाई थाहा छैन यदि त्यस्तो कारण छ कि जब म बुट ड्राइभहरू छान्ने कोसिस गर्छु, न त SD कार्ड न पेंड्राइभ देखा पर्दछ, केवल मेरो ड्राईपले स्थापना गरेको हार्ड ड्राइभ।
के कसैले मलाई समाधान दिन सक्दछ यदि मँ एक पटक र सबै सफा स्थापना गर्न सक्दछु?
म त्यो स्वच्छ स्थापना गर्न चाहान्छु किनकि मलाई मेल र अन्य मेल क्लाइन्टहरूको समस्या छ। खुला समय पछि, तिनीहरू बन्द स्ल्याम्ड छन्।
म तपाइँको सुनुवाईको लागि तत्पर छु।
Andres Mendoza लाई जवाफ दिनुहोस्
किनकि मैले यो सन्देश मेरो म्याक get erasing ड्राइभ '/ खण्डहरू / USB' मा प्राप्त गर्दछ ... ... सन्देश understand घटना sysonotf understand बुझ्दैनन्।
म्याकोल क्यालेरो भन्यो
र म्याकोस सियरा स्थापनाकर्ता कहाँ पाउन सक्छु?
म्याकोल क्यालेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई यो स्थापना गर्ने प्रयासमा समस्या छ।
म सबै चरणहरू गर्छु, तर जब म कम्प्युटर बन्द गर्दछ, यसलाई फेरि खोल्नुहोस् (स्थापनाको लागि युएसबीको साथ) र सुरुमा ध्वनी आयो भने ALT थिच्नुहोस्, म्याकले USB लाई बुट डिस्कको रूपमा चिन्न सक्दैन। म केवल कम्प्युटरको सामान्य बुट डिस्क देख्छु। यसको कारण के हुन सक्छ? के त्यहाँ समाधान छ?
Quifar लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते। मलाई पनि त्यस्तै भयो। समाधान खोज्न मलाई केहि समय लाग्यो। यदि तपाईं युएसबीमा हेर्नुभयो भने (जहाँ तपाईंसँग म्याकोओएस छन् तपाईंले सियरा आइकन र "युटिलिटीहरू" नामक फोल्डर देख्नुहुनेछ जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ, तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि अनुप्रयोगहरूमा "प्रतिबन्ध" चिन्ह छ र तपाईं तिनीहरूलाई खोल्न सक्नुहुन्न। यी धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। , किनकि तपाईं तिनीहरूलाई फर्म्याट र डिस्क बुट गर्दा प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसको समाधानको लागि, मैले अर्को यूएसबीमा जानु पर्ने थियो जहाँ मसँग पहिले नै मकओस एल क्यापिटन थियो, ती एप्लिकेसनहरू युनिटमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् जहाँ सियरा रहेको थियो र त्यसपछि मात्र यसले मलाई चिनेको थियो (द्वारा सुरुमा ALT थिच्दै) उनले त्यसो गरेन किन कि त्यसो भयो। मलाई लाग्दछ यो एक डिस्कमेकर त्रुटि हो। यदि तपाई अनुप्रयोगहरू चाहानुहुन्छ भने मलाई ईमेल पठाउनुहोस्। eonyorch@gmail.com
यार्चलाई जवाफ दिनुहोस्
जेभियर एलेजान्ड्रो प्याडिला भन्यो
माफ गर्नुहोस्। म USB मार्फत मेरो म्याकमा ओएस एक्स सियरा स्थापित गर्न खोज्दै छु… .. जब म USB बाट स्थापना गर्न खोज्छु, बार स्याउको मुनि सर्दै हुन्छ तर बीचमा यो स्थिर हुन्छ र र colors्गहरूको घेरा कताई बाहिर आउँछ र त्यहाँ के भइरहेको छैन म के गर्न सक्छु? मैले पूरै दिनको लागि त्यस्तै छोडिदिएको छु र यो अगाडि बढिरहेको छैन म यस फक्सन मैक बिरामी छु
Javier Alejandro Padilla लाई जवाफ दिनुहोस्
जोस म्यानुएल भन्यो
तपाईको योगदानका लागि धेरै धन्यबाद। टाइम मेशीन प्रतिलिपि लोड नगरी नै स्क्र्याचबाट सुरू गर्न तपाईको प्राथमिकताका बारे तपाईले एक अनुप्रयोगबाट अर्को म्याकमा सार्नुभएको अनुप्रयोगलाई के भन्ने सोच्नुहुन्छ?
मलाई व्याख्या गर्नुहोस्, ० बाट नयाँ म्याक स्थापना गर्नुहोस् र तपाईंको डाटालाई टाईम मेशीनबाट तपाईंको पुरानो म्याक पछि माइग्रेट गर्नुहोस्।
जोस मानुएललाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो युएसबी बुटेबल बनाउन यो असम्भव छ (मैले यसलाई G जीबी र १G जीबीको साथ प्रयास गरेको छु)
मैले यसलाई डिस्कमार्कर X6को साथ प्रयास गरेको छु र मैले त्रुटि «इरसिing ड्राइभ '/ खण्डहरू / BO16GB' पाउँदछ ... ...« सन्देश «घटना sysonof understand बुझ्दैन र त्यहाँबाट यो हुँदैन।
मैले डिस्क निर्मातासँग पनि यसको परीक्षण गरें। यसले मलाई पुन: बुट गर्ने र स्थापनाकर्ता पनि गर्ने एकाई छनौट गर्न दिन्छ, तर मैले "स्थापनाकर्ता स्थापना गर्नुहोस्" बटन क्लिक गरेपछि यो त्यहाँ रहन्छ। मैले पहिले नै १०० पटक बटन हिट गर्न सक्छु जसले केही पनि गर्दैन।
मैले डिस्क ड्राइवको साथ पनि प्रयास गरेको छु। स्थापना ईडीएसडी.डीएमजी क्लिक गरेर पुन: भण्डारण गर्नुहोस् र यसलाई गन्तव्य युएसबी तोक्नुहोस्। यसले मलाई भन्छ कि यसले स्रोत छवि अन्वेषण गर्नुपर्दछ र जब यो समाप्त हुन्छ यसले मलाई "इन्स्टलर ESD.dmg अन्वेषण गर्न असमर्थ (कार्य लागू गरिएको छैन)" न त पूर्ण रूपमा ...
म हताश छु, कसैसँग अरु केहि विचारहरु छ?
Leatus लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खरै यसलाई युनेटबुटिनको साथ प्रयास गरें र ... पनि। तिनीहरूसँग उन्माद वा के छ?
Fco। Javier भन्यो
राम्रो जोर्डी, म म्याक मिनी अपडेट गर्न को लागी3दिनको लागि निदाएको छैन। तथ्य यो हो कि यसले मलाई बताउँछ कि यो अद्यावधिक भएको छ र जब यो सुरु गर्ने प्रयास गर्दछ यो रातभर फालियो र पट्टी २ वा mm मिमी भन्दा बढी हुँदैन र यो सुरु हुँदैन ... कुनै सम्भावित समाधान? म काटिरहेको छु र कालो घेराहरूसँग यी दिनमा अलि निद्राबाट!
एक अभिवादन र अग्रिम धन्यवाद
Fco। Javier लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मसँग १ 13 इन्चको म्याकबुक प्रो छ, मध्य २०१२ को बीचमा, मैले सिएरा स्थापना गरें र यो घातक छ। म योसेमाइट स्थापना गर्न चाहन्छु र डिस्कमेकरमा यो देखिन्छ - मेटाउने ड्राइभले सन्देश घटना sysonotf बुझ्दैन? म के गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो iMac साथ यात्रा गर्नुहुन्छ भने, यहाँ यसको लागि उच्च सुरक्षा बक्स छ